၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ၁၅:၀၃ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၀
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး‎ ၀၄:၂၆ +၁၈‎ ‎Myatkrub ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး‎ ၀၃:၃၁ +၃၁‎ ‎Myatkrub ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
တမ်းပလိတ်:Both‎ ၀၀:၂၄ +၈၈‎ ‎Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Updated to en:Template:Both Ver: 04:31,4December 2016. Crossref: en:Help:Substitution.
မော်ဂျူး:Coordinates‎ ၀၀:၀၅ +၈၃၅‎ ‎Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Toolforge webservices have migrated to the toolforge.org domain. Merged with latest changes from en:Module:Coordinates Ver: 23:18,7July 2020.
၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၀
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး‎ ၁၆:၅၂ +၁၈‎ ‎John Alex Ethene ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ မြို့တော်အမည် မှားယွင်းနေ၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ တရားဝင်ပြောင်းလခြင်း မရှိသေးပါ။ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် Manual revert
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:RecentChangesLinked/မိုင်းတုံလေဆိပ်" မှ ရယူရန်